အလန်းစား ဒေတာ Pack
‘’အလန်းစားဒေတာ အစီအစဉ်’’ ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အရင်က ဒေတာလိုက်ပွဲ+ အစီအစဉ်ထက်ဈေးပိုသက်သာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ရက် ၃၀ သက်တမ်းရှိတဲ့ 1GB ဒေတာကိုမှ ၉၉၉ ကျပ်ပဲ ကျသင့်တော့မှာဖြစ်ပြီး 1MB ကို ၁ ကျပ်ထက်တောင်နည်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ အရင်လို သက်တမ်းရက် ၃၀ မပြည့်ခင် အစီအစဉ်သစ်တစ်ခု ထပ်ဝယ်ပြီး နောက်ထပ်ရက် ၃၀ လည်းသက်တမ်းတိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအရမ်းကောင်းတဲ့ အလန်းစား ဒေတာ အစီအစဉ်တွေကို *140# ကိုခေါ်ဆိုပြီးခေါ်ဆိုပြီး အောက်ပါအတိုင်း နှစ်သက်ရာ အစီအစဉ်ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
အလန်းစား ဒေတာ လက်ဆောင် အစီအစဉ်
442 သို့ 699<space>ပေးပို့လိုသောဖုန်းနံပါတ် ဟု ပို့ပါ။
442 သို့ 990<space>ပေးပို့လိုသောဖုန်းနံပါတ် ဟု ပို့ပါ။
442 သို့ 1999<space>ပေးပို့လိုသောဖုန်းနံပါတ် ဟု ပို့ပါ။
442 သို့ 2999<space>ပေးပို့လိုသောဖုန်းနံပါတ် ဟု ပို့ပါ။
442 သို့ 4999<space>ပေးပို့လိုသောဖုန်းနံပါတ် ဟု ပို့ပါ။
442 သို့ 9999<space>ပေးပို့လိုသောဖုန်းနံပါတ် ဟု ပို့ပါ။
442 သို့ 19999<space>ပေးပို့လိုသောဖုန်းနံပါတ် ဟု ပို့ပါ။
442 သို့ 29999<space>ပေးပို့လိုသောဖုန်းနံပါတ် ဟု ပို့ပါ။
ဒေတာလိုက်ပွဲအစီအစဉ်နှင့် အပိုလက်ဆောင်ကို ဘာကြောင့်မဝယ်ယူနိုင်ပါသနည်း။
အသုံးပြုသူများ ပိုမိုသက်သာစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် အလန်းစားဒေတာအစီအစဉ်များကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ အလန်းစားဒေတာအစီအစဉ်မှာ ဈေးနှုန်းအတူတူနှင့် ပိုမိုများပြားသော ဒေတာအသုံးပြုခွင့်များကို ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်က 750MB (650MB+100MB)ကို ၉၉၉ကျပ်နှင့်ရရှိခဲ့ရာမှ အလန်းစားဒေတာအစီအစဉ်နှင့်ဆိုလျှင် ၉၉၉ကျပ်နှုန်းဖြင့် 1GB ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအစီအစဉ်မှာ အတန်ဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်၍ အလန်းစားဒေတာအစီအစဉ်နဲ့ အမြန်ဆုံး 4G plus ကွန်ရက်ကို သုံးစွဲလိုက်ပါ။
ဒေတာလိုက်ပွဲအစီအစဉ်များကျန်ရှိသေးပြီး အလန်းစားဒေတာအစီအစဉ်များ ထပ်မံဝယ်ယူပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။
ဒေတာအသုံးပြုခွင့်များမှာ ပေါင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းမှာလည်း ပေါင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
ကျန်ရှိနေသော ဒေတာအသုံးပြုခွင့်များနှင့် သက်တမ်းကို မည်သို့စစ်ဆေးနိုင်မည်နည်း။
My Ooredoo App Application နှင့် Ooredoo Next တွင်လည်း စစ်ဆေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး *140*6#ကိုခေါ်ဆိုပြီးလည်း စစ်ဆေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အူရီဒူးအချင်းချင်းပေးပို့နိုင်သော SMS အသုံးပြုခွင့်များနှင့် သက်တမ်းကိုမည်သို့စစ်ဆေးနိုင်မည်နည်း။
My Ooredoo App သို့ Ooredoo Next တွင်လွယ်ကူစွာ စစ်ဆေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး *124#ကိုခေါ်ဆိုပြီးလည်း စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
ဒေတာလိုက်ပွဲအစီအစဉ်များနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင်များ ရရှိထားပါက ငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင်များမှ စတင်ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။ Facebook အစီအစဉ်နှင့် အလန်းစားဒေတာအစီအစဉ်များရှိပါက Facebook အသုံးပြုမှုအတွက် Facebook အစီအစဉ်များမှ စတင်ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။
မသုံးစွဲကျန်ရှိနေသော အလန်းစားဒေတာများကို သက်တမ်းတိုးနိုင်ပါသလား?
သက်တမ်း (၃၀)ရက်အတွင်း (သို့) သက်တမ်းကျော်လွန်ပြီး (၇)ရက်အတွင်း အလန်းစားဒေတာအစီအစဉ်အသစ်တစ်ခုကို ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် သက်တမ်းတိုးနိုင်ပါသည်။
အလန်းစားဒေတာအစီအစဉ်များနှင့် Youtube ကြည့်ခြင်း၊ သီချင်းနားထောင်ချင်း၊ ဂိမ်းကစားချင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား?
အူရီဒူးရဲ့ 4G Plus အမြန်နှုန်းနဲ့ဆို ကြိုက်တဲ့အစီအစဉ်များကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများကို လက်ဆောင်ပေးပို့နိုင်ပါသလား?
My Ooredoo App မှတစ်ဆင့် Buy Packs သို့သွားပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အစီအစဉ်များကို လက်ဆောင်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
မသုံးစွဲဘဲကျန်ရှိနေသော အလန်းစားဒေတာများကို သက်တမ်းရက် ၃၀အတွင်း (သို့) သက်တမ်း၃၀ရက်ကျော်လွန်ပြီး (၇)ရက်အတွင်း အ
သစ်ထပ်မံဝယ်ယူပါက ဒေတာများမှာပေါင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းလည်းတိုးသွားမည်ဖြစ်သည်။
အလန်းစားဒေတာမှ ရရှိသော အူရီဒူးအချင်းချင်းပေးပို့နိုင်သော စာတိုပေးပို့ခွင့်များမှာ သက်တမ်းကျော်လွန်သွားပါက သက်တမ်းတိုးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
အလန်းစားဒေတာများကို မိမိအလိုရှိသလောက် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
သက်တမ်းကုန်ဆုံး (သို့)သုံးစွဲခွင့်ကုန်ဆုံးသွားပါက သုံးသလောက်ပေးနှုန်းထားဖြင့်ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။
အလန်းစားဒေတာများဧ။်ပရိုမိုးရှင်းကာလသည် နောက်ထပ်မကြေငြာမီအတွင်း အကျုံးဝင်သည်။
အလန်းစားဒေတာ အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သတ်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား ooredoo.com.mm တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။